देउवालाई गल्ती गर्ने छूट छ ? - Nagarik Today
होम » देउवालाई गल्ती गर्ने छूट छ ?
तर सरकारको राजनीतिक धरातल कमजोर छ। पाँच दल पाँचतिर फर्केको गठबन्धनका सबै दलभित्र आन्तरिक कलह छ। केपी ओली नेतृत्व सरकारले जगाएको निराशालाई आशामा बदल्ने कुरा
टाढाको कुरा भयो। कोराना नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ, अन्त्य होइन। बजार खुलेका छन् तर सुचारु भएको छैन। यस्तो बेलामा जनताले साँच्चै कुरा होइन, काम खोजेका छन्। प्रचार होइन, परिणाम चाहेका हुन्। ती पदाधिकारीको कुरा ठीकै हो।
कृष्णप्रसाद भट्टराईप्रधानमन्त्री देउवाबिपी कोइरालाशेरबहादुर देउवा